ဗောက်ထခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းအတွက်အိမ်သုံးကုထုံးများ - စတိုင်ကျသောအမျိုးသားများအတွက်အကြံပြုချက်များ စတိုင်ကျသောအမျိုးသားများ
ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲရှိသည့်ဗောက်သည်မည်မျှပျော်ရွှင်ပြီး၎င်းအားမလိုလားအပ်သောအသွင်အပြင်ကိုပေးနိုင်သည်။ မသင့်လျော်သောအရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်များစွာကျော်လွန်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုရမည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ရေပြား၌ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုလိုသည် dermis peeling လုပ်တဲ့အခါ
ဗောက်ထခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အပင်ပန်းဆုံးအရာသည်ဘယ်အချိန်လဲ မသက်မသာယားယံခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်၊ ဗောက်၏ပုံသဏ္န်နှင့်ရှိနေခြင်းကိုပိုမိုလျော့နည်းစေသောအရာဖြစ်သည်။ ဦး ရေပြားကိုကုတ်တာမကောင်းပါဘူး၊ ဗောက်တွေလဲငါတို့ပုခုံးပေါ်ကျွတ်ပြီး၊ သူတို့၏တည်ရှိမှုသည် ပို၍ သိသာထင်ရှားသည်။
ဗောက်ထတာလည်းပါတယ် pityriasis ဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ရေပြားသည် ဦး ရေပြား၏ dermis flaking ၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံရှိသည်။ သို့သော်သေနေသောအသားကိုထုတ်ပစ်ခြင်းနည်းလမ်းသည်ပိုနှေးသောအခါ၊ ၎င်းသည်ဖြစ်လာသည် ဆဲလ်သေများအလွန်အကျွံစုဆောင်းခြင်း pityriasis သို့မဟုတ်ဗောက်ဖြစ်စေသောအရာများ
သူ၏အခြေအနေသည်အကျိုးဆက်အဖြစ်လာသည် အများအပြား၏ယားယံခြင်း ဓာတုထုတ်ကုန်များs ငါတို့ ဦး ခေါင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ လွှမ်းမိုးနိုင်သောအခြားအချက်တစ်ခုမှာသင်အလွန်ပူအိုက်စွတ်စိုသောဒေသများတွင်သင်နေထိုင်သောအခါ၎င်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည် မှို၏အသွင်အပြင်နှင့်အခွံခွာရန်ခက်ခဲစေသည်။
သူ့အသွင်အပြင်လည်းပေါ်လာသည် အပျိုဖော်ဝင်စအဆင့်မှာ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှပျော့လာသည်။ ဒီအပြောင်းအလဲဟာဟော်မုန်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပြီးဒီအဆင့်မှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုထုံးများစွာရှိသည် ၎င်းကိုနှိမ်နင်းရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွင်မရေမတွက်နိုင်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ခေါင်းလျှော်ရည်များကိုကျင့် သုံး၍ ကုသပေးနိုင်သည်။ မင်းအတွက်သုံးဖို့ရှိရင် အိမ်သုံးကုထုံးများနှင့်သဘာဝအတိုင်းပြုလုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်အချို့ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။
အစားအသောက်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် ၎င်း၏အသွင်အပြင်ကိုနှစ်သက်သောအချက် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာသည်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြာချိန်ကိုသိသိသာသာတိုးစေလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ငါတို့မှာဗောက်ရှိနေပြီးစိတ်ထဲမှာယားယံတာနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုရင်နီရဲတဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်။ seborrheic အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း၏အသွင်အပြင်
ဤအဆီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ခေါင်း၌ကုသမှုတစ်ခုထက်ပိုသောကုထုံးများဖန်တီးခြင်းအတွက်အလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည် anti-inflammatory, antifungal နှင့် antibacterial ။ သင်လိုချင်သောအရာသည်ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေလျှင် ဦး ရေပြားပေါ်တွင်အနည်းငယ်ကျစေသဖြင့် ဦး ရေပြားယားယံခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့အဲဒါဘဲ ဗောက်ထခြင်းကိုသက်သာစေသောဆေးမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ယားယံသည်အဆီပြန်တဲ့အကြွင်းအကျန်မကျန်ခဲ့စေဖို့အတွက်ဒီအဆီကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဤအပင်သည်မရေမတွက်နိုင်သောကုသမှုများအတွက်ဂုဏ်သတ္တိများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည် antibacterial နှင့် antifungal ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဗောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၌ရှိနေသောမှိုများကိုလျော့နည်းစေသည်။ ပစ်ရမယ် ရှားစောင်းလက်ပတ်နှစ်ခုဇွန်း ခေါင်းကိုညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ အိုက်တင်လုပ်လို့ရပါတယ် 20 မိနစ် ပြီးတော့တစ်ညလုံးအဲဒါကိုခွင့်ပြုတဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်။ ထို့နောက်၎င်းကိုရေဖြင့်ဆေး။ ပျော့ပျောင်းသောခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်သန့်စင်ပေးရမည်။ အနည်းဆုံးဒီကုသမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်လေ့ရှိပါတယ် နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ဗောက်ပျောက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်းနှင့်ဆံသားကိုအစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်းတို့ကိုအာမခံသည်။
ဤအသီးသည်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများများစွာရှိသည်။ သူတို့နှင့်အတူ antifungal ဂုဏ်သတ္တိများ ၎င်းသည်မှို၏အသွင်အပြင်ကိုကူညီဖယ်ရှားပေးပြီး၎င်း၏ဗီတာမင် C ကြောင့်ဗောက်ရှိနေခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ သံပုရာသီးညှစ် ဝါဂွမ်းလုံးတစ်လုံးကိုစိမ်ပြီး ဦး ရေပြားပေါ်မှာထည့်ပါ။ အနားယူပါစေ ၁၀ မိနစ်ထားပြီးရေဆေးချပါ.
အုန်းဆီ၏ကောင်းကျိုးများစွာကိုအချိန်တိုင်းပြသနေသည်။ ယားယံခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်ကောင်းသည် ဦး ရေပြား၏အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော lauric acid ပါ ၀ င်သည် antifungal ဂုဏ်သတ္တိများ ဗောက်များကိုလျှော့ချပေးပြီးဘက်တီးရီးယားများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည်ဆံပင်အာဟာရအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
၎င်းကို mask အဖြစ်သုံးနိုင်သည် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ် ရောမွှေပါ သံပုရာတစ်ဝက်ဖျော်ရည်နှင့်ဆီသုံးဇွန်းဦး ရေပြားပေါ်တွင်လိမ်း။ ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပြီးမိနစ် ၂၀ ထားပါ။ ထို့နောက်၎င်းကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေအနည်းငယ်ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။
၎င်း၏အကြောင်းအရာ အက်စစ်အက်စစ် တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် မှိုနှင့်ဘက်တီးရီးယား။ ၎င်း၏အပလီကေးရှင်းသည်ဆံပင်ကျွတ်များကိုပိုမိုသန့်စင်ရန်ကူညီပေးပြီးဗောက်ကြောင့်ဖြစ်သောယားယံခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းကိုရောစပ်ရန် ရေခွက်တစ်ဝက်နှင့်ရှာလကာရည်¼ခွက် သင်၏ဆံပင်ကို၎င်းနှင့်ဆေးပါ။ အနံ့ဆိုးကင်းဝေးစေရန်ဆံပင်ကိုလုံးဝခြောက်အောင်ထားရမည်။
ဒီအမြစ်ရှိတယ် antibacterial နှင့် anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဂျင်းကိုညှစ်ပြီး ဦး ရေပြားပေါ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ထားလိုက်ပါ မိနစ် ၃၀ လုပ်ဆောင်ပါ တစ်နာရီကြာလျှင်ဆံပင်ကိုကောင်းစွာသုတ်ပါ။ ဂျင်းမှာကာကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း?
bicarbonate သည်ဆံပင်၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်သည်။ မှိုများကိုဖယ်ရှားပေးသည် ဦး ရေပြားကိုနက်ရှိုင်းစွာသန့်စင်ပေးသည်။ အရောအနှော မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ၂ ဇွန်း၊ သံပုရာရည်တစ်ဇွန်းနှင့်ရောပါ ရေ ၃ ဇွန်း ၎င်းကိုအိမ်၏ဧရိယာပေါ်တွင်လိမ်းပေးပြီးညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပြီးနောက်ရေအေးဖြင့်ဆေးပါ။ ဒီ pastes တွေကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ် တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ပြီးတော့ဗောက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးစေပါလိမ့်မယ်။
ထောက်ခံချက်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြသသောအသေးစိတ်များနှင့်ပမာဏများကိုအမြဲသုံးပါ။ မကြိုးစားနဲ့ အကြံပြုသည်ထက်အများကြီးပိုသုံးပါ ဒါမှမဟုတ် ဦး ရေပြားကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်အချိန်တွေကိုရိုက်ပါ။ ထို့ပြင်တူညီသောအာနိသင်ဖြစ်ပေါ်စေသောဖော်ပြချက်များထဲမှပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရောနှောရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ဤသဘာဝကုထုံးအားလုံးအထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုငါမျှော်လင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ဗောက်ထခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းအတွက်အိမ်သုံးကုထုံးများ